အပြာရောင် Lola နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
အပြာရောင် Lola နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အပြာရောင်မူရင်းမို-Fi ကိုအကောင်းဆုံး bits သည်သိမ်း ယူ. နှင့်တစ်ဦးပိုမိုပေါ့ပါးသို့သူတို့ကိုငါချရေစက်ဖြစ်ပါတယ်, over-the-နားကိုနားကြပ်ပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲအစုံ.
သန့်စင်ပြီးဒီဇိုင်း, အလွန်ကြီးစွာသောအသံနဲ့တစ်ဦးပိုမိုပေါ့ပါး, ပိုအဆင်ပြေမထိုက်မတန်မိုက်ခရိုဖုန်းထုတ်လုပ်သူအပြာရောင်ရဲ့နောက်ဆုံးနားကြပ်အထက်တစ်ဖြတ်ပါစေ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အပြာရောင် Lola နားကြပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: သံဗူးနှင့်မသင့်ရဲ့ပျှမ်းမျှအစု” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 3rd မတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 08.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
မိုက်ခရိုဖုန်းကုမ္ပဏီ ပြာသော အတူမှိုကိုချိုးဖျက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ powered-up ကနားကြပ်မို-Fi ကိုအတွက် 2014, ယခုကပေါ့ပါးနှင့်အတူပြန်ဖွင့်, Lola ကိုခေါ်ပိုအဆင်ပြေအစုံ.
Lola ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစားမှာသူတို့ရဲ့နောင်တော်မို-Fi ကိုရန်အလွန်ဆင်တူ - အတူတူပင်ဦးခေါင်းကိုခေါငျးအုံးနှင့်အတူ, တင်ခဲ့သည်လက်နက်နှင့်နားခွက် - ဒါပေမယ့်အသစ်နားကြပ်ကိုပိုမိုသန့်စင်ပြီးခံစားရ, ပိုကောင်းအတူတူထားတွေအများကြီးပေါ့ပါးများမှာ.
နားခွက်ကိုတစ်ဦးပီသသောလက်ရုံးတော်အားဖြင့်အရပျ၌ကငျြးပခဲ့သည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သူတို့ကဆဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံပါပဲ, အများဆုံးပြိုင်ဘက်ရန်အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရှာဖွေနေနှင့်လမ်းပေါ်မှာကြည့်၏သိသာထင်ရှားသောပမာဏကိုရရှိအောင်: သင်မှာစိုက်ကြည့်လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်မဟုတ်လျှင်သင့်အသွားအပြန်အဘို့ထိုသူတို့ဝတ်ဆင်ဖို့မလိုပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါနှစ်ဦးတင်ခဲ့သည်လက်နက်နားခွက်ဦးခေါင်း၏ဘေးထွက်မှစင်ပြိုင်ကိုင်, သောဖိအားထုတ် evens. သူတို့ကကောင်းကောင်းအကြှနျုပျ၏အတော်လေးကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဦးခေါင်းကမြိ်ု့နဲ့သူတို့ချွတ်လာသွားခဲ့ကြသည်တူမခံစားရဘူး, သူတို့သည်လည်းတိုးချဲ့နားထောင်ခြင်းကာလအဘို့အဆင်ပြေခဲ့ကြ.
နားခွက်လည်းချင့်ရွှေ့နှင့်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လိမ်နှင့်စောင်း, သူတို့ကိုအများဆုံးအဘို့သက်သာဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ညှိနှိုင်းမှုပေးခြင်း. နားခွက်ကြီးများနှင့်နက်ရှိုင်းသောများမှာ, လွန်း, ငါ့နားအဓိပ်ပာယျမပွုခဲ့ အတွင်းမထိ.
နှစ်ဦးလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ 3.5mm နားကြပ်ကြိုးတွေနဲ့အတူနားကြပ်သင်္ဘောကို: ဝေးလံခေါင်သီခြင်းမရှိဘဲမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အခြားတစ်ဦးကို iPhone-သဟဇာတဝေးလံခေါင်ဖျားနှင့်တသားတ. Non-iOS ထုတ်ကုန်အပေါ်ခေတ္တနားနှင့်ကစားဘို့ဝေးလံခေါင်သီအကျင့်ကိုကျင့်, ဒါပေမဲ့မအရှိဆုံးအခြားစမတ်ဖုန်းများအပေါ် volume အထိန်းချုပ်ရေးအတွက်. အပြာရောင်တစ်ဦးက Android သဟဇာတဗားရှင်းရှိသည်ပါဘူး.
နားခွက်ကြီးများဖြစ်ကြသည်, နက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ဦးခေါင်းအပေါ်အဆင်ပြေ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါကြီးတွေ, ထူသောခွက်အတော်လေးကောင်းစွာနောက်ခံဆူညံသံထွက်ပိတ်ဆို့ပြီးအလွန်အသံကျယ် volumes ကိုမှာ မှလွဲ. နှောင့်အယှက်ကိုအခြားသူများမှသင်၏ဂီတစောင့်ရှောက်.
သူတို့ကငါကိုမကြာသေးမီကမှနားမထောငျဖို့အပျော်အပါးခဲ့ဖူးတဲ့ပိုကောင်းအသံနားကြပ်တချို့ရှိနေပါတယ်. သူတို့ကရွှံ့အနိမ့်အဆုံးတစ်ခုသို့မဟုတ် shrill High-end သည်အသံမပါဘဲမျှမျှတတနေ. သူတို့ကတစ်ဦး punchy နှင့်လုံ့လရှိသူနားထောင်ခြင်းအတှေ့အကွုံထုတ်လုပ်ရန်, အသံကောင်းခွဲခြာနှင့်အတူ. သငျသညျအစွမ်းထက် Sub-ဘေ့ရပေမယ့်ဆဲရှင်းလင်းစွာအသံကွားနိုငျ, အရာအများအပြားနားကြပ်နှင့်အတူရုန်းကန်.
တစ်ဦးပိတ်ထားတဲ့နောက်ကျောနားကြပ်များအတွက်, သူတို့တစ်တွေအတော်လေးပွင့်လင်း soundscape ရရှိပါသည်, လွန်း, သောအချို့သောပိုပြီးတိုက်ရိုက်သံဗူးထက်လျော့နည်းပင်ပန်းတယ်ကိုနားထောငျတိုးချဲ့စေသည်. သူတို့ဟာကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူနည်းတူအဆင်ပြေပါတယ် ရာဇဝငျ၏အပြာရောင်က Sky Black ကသေမင်းရဲ့ချိုင့် သူတို့နှင့်အတူရှိနေသောအဖြစ် အ Kinks အပြည့်အဝ volume အမှာ, သူတို့ကိုအလွန်ကြီးစွာသော All-rounder အောင်.
အမို-Fi နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, သူတို့အဖြစ်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်မဟုတ်ပါဘူး. ဟုတ်ကဲ့, cable ကိုနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်၏အလေးချိန်ချိတ်ဆက်မှုကိုဖြတ်တောက်အပေါ်ကျယ်သောအက်ကွဲကြောင်းထည့်သွင်းသော - - သင်သည်သင်၏ခေါင်းကိုငွေရှာပေးနေသည့် amp ၏အားနည်းချက်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့သင်သည်လည်းသူတို့အားလူအစုအဝေးထဲကထွက်ရပ်ကိုဖန်ဆင်းသောအရာကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး.
အဆိုပါတုံး headband သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းထိပ်ပေါ်အငြိမ့်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံထိုင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Lola နားကြပ်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူအတွက်ရရှိနိုင်ပါ, £ 219 ကုန်ကျ, သောပရီမီယံကို wired နားကြပ်များအတွက် mid-range မှာသူတို့ကိုလိုကျတယျ.
အပြာရောင်မူရင်းမို-Fi ကိုအကောင်းဆုံး bits သည်သိမ်း ယူ. နှင့်တစ်ဦးပိုမိုပေါ့ပါးသို့သူတို့ကိုငါချရေစက်ဖြစ်ပါတယ်, over-the-နားကိုနားကြပ်ပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲအစုံ. သူတို့ကဆဲပေါ့ပါးဆုံးမပါတယ်, သူတို့သည်သင့်အထဲကဟောင်းနွမ်းလျှင်သတိပြုမိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ရလိမ့်မည်, မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ကမောင်းနှင်လာသောအခါဒါပေမဲ့သူတို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသံ.
သင်သည်သင်၏ပျမ်းမျှအားကြီးမားသောနှင့် gaudy သံဗူးထက်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားတဲ့ကြည့်ရှုကောင်းသောအသံနှင့်တစ်စုံပြီးနောက်ဆိုရင်ကြည့်ရကျိုးနပ်.
အကောင်းအဆိုး: ကြီးမားသော, rounded သံကို, punchy နက်ရှိုင်းသောဘေ့နှင့်အတူလိုအပ်သည့်အခါ,, မြင့်မားချိန်ညှိခြင်းနှင့်တိုးချဲ့နားထောင်ခြင်း sessions အတွက်အဆင်ပြေ, သင်၏ဦးခေါင်းပေါ်တွင်တင်နေဖို့, လျောက်ပတ်သောအသံသည်အထီးကျန်မှုတွေ
Cons: ဆဲအတော်လေးလေးလံ, စျေးကြီး, အဘယ်သူမျှမက Android ဝေးလံခေါင်သီထောက်ခံမှု, ကြီးမားတဲ့နှင့်မျက်စိ-ဖမ်း
အဆိုပါနားကြပ်နှစ်ခုလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ကြိုးတွေအတူပါလာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အပြာရောင်မို-Fi ကိုနားကြပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: powered-up က Hi-Fi နားကြပ်
Philips က SHB9850NC နားကြပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ဘဏ်ခြိုးဖောကျမပါဘဲပယ်ဖျက်ဆူညံသံ
အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, နားကြပ်, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ
← ထိပ်တန်း 20 iPhone နဲ့ iPad App များနှင့် The Month ရဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲ ကင်ဆာကုသမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားတော်လှန်ရေး →